ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ဇီဝစိုးငှက်ရဲ့အန်ဖတ် – Tameelay
ငှက်သိုက်သည် ပျံလွှားငှက် တစ်မျိုးတွင် ပါဝင်သည့်ငှက်များက လုပ်သော အသိုက် ဖြစ်ပါသည်။မိုးစာငှက်၊ ပြီးလဲငှက်၊ ဇီဝစိုးးငှက်များမှ ငှက်သိုက်ကို ထုတ်ယူရရှိနိုင်၏။
မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ငှက်သိုက်ကို ဇီဝစိုးငှက်မှသာ ရရှိပါသည်။ ဇီဝစိုးငှက်သည် လေထဲတွင် ပျံသန်းရင်း ပိုးမွှားကောင်များကို ဖမ်းစားတတ်သောကြောင့် “လေစားငှက်´´ ဟုလည်းခေါ်သည်။
ဇီဝစိုး ငှက်မှ အမဲရောင်ငှက်သိုက်နှင့် အဖြူရောင် ငှက်သိုက် (၂)မျိုးရရှိပါသည်။ အမဲရောင်ငှက်သိုက် ကို Collocalia innominata ဆိုသည့် ဇီဝစိုးငှက်မှရရှိပြီး အဖြူရောင်ငှက်သိုက်ကို Collocalia fuciphaga ဆိုသည့် ငှက်သိုက်မှ ရရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငှက်သိုက်များကို ထားဝယ်ကမ်းခြေအနီးရှိ ကျွန်းများ၊ မြိတ်ကျွန်းစု၊ ပုသိမ်မြို့ အနောက်တောင်ဘက်ရှိ ကျွန်းများတွင် တွေ့ရ၏။
တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းရှိ ငှက်သိုက် ကျွန်းပေါင်း (၃၂)ကျွန်းမှ အဖိုးတန်းငှက်သိုက်များ ထွက်ရှိပါသည်။
မြိတ်ကျွန်းစုရှိ ငှက်သိုက်များကို ပုလောမြို့နယ်ရှိ မလိကျွန်း၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်ရှိ ရေအေးကျွန်းစု၊ ဘုတ်ပြင်း မြို့နယ်ရှိ ပုလုတိကျွန်းစု၊ ကော့သောင်းမြို့နယ်ရှိ ကဆိုင်းလှနှင့် ကော့ငန်းကျွန်းစု များမှ ရရှိ၏။ ယင်းကျွန်းစုများ အနက် မလိကျွန်းမှ ငှက်သိုက်အများဆုံး ရရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငှက်သိုက်အများဆုံး ထုတ်လုပ်ပေးသော ဇီဝစိုးငှက်သည် စာကလေး အရွယ်ခန့်သာ ရှိပြီး မီလီမီတာ ၁၀၀ မှ ၄၀၀ အတွင်းရှိသည်။
ကျောဘက် ငှက်မွေးမှာ အမဲရောင် ရှိပြီး ၀မ်းဘက် ငှက်မွေးမှာ မီးခိုးရောင် ဖြစ်နေ၏။ ဦးခေါင်းမှာ သေးလုံးနေပြီး ကတော့ပုံရှိ မာသော နှုတ်သီးနှင့် ကျယ်သော ပါးစပ်ပေါက် ရှိသည်။
တောင်ပံသည် ချွန်ပြီး အမြီးတိုသောကြောင့် ပျံသန်းမှုကို လျင်မြန်စေသည့် အပြင် ညအိပ်သည့် အချိန်မှ လွဲ၍ တစ်နေ့လုံး ပျံနိုင်သည်။ တိုပြီးကောက်နေသော ခြေသည်းပါသည့် ခြေချောင်း(၄)ချောင်းရှိ၏။
ခြေချောင်း(၄)ချောင်းအနက် (၃)ချောင်းသည် အရှေ့ဘက်သို့ ကား၍ ညွှန်းနေသောကြောင့် ကျောက်ဆောင် အစွန်းနှင့် အဆောက်အဦး များတွင် ခိုင်မြဲစွာ ကုတ်တွယ်ထားနိုင်သည်။
ဇီဝစိုးငှက်သည် လူနှင့်ဝေးသည့် ပင်လယ်တွင်း ကျွန်းအချို့၌ ကျောက်ဆောင် လှိုဏ်ဂူများ အကြားတွင် နေထိုင်လေ့ရှိသည်။ အုပ်စုဖွဲ့နေတတ်၍ တစ်အုပ်စုလျှင် ထောင်ပေါင်း များစွာ ပါဝင်၏ ။
မြေပြင်တွင် ကျက်စားလေ့မရှိပေ။ ဝေဟင်နှင့် ပင်လယ် ရေပြင် ထက်တွင် လျင်မြန်စွာ ပျံသန်းစဉ် တောင်ပံပါ အင်းဆက်များကို ဖမ်းယူ စားသောက် ပေသည်။
တိမ်ရှိသည့် နေရာအထိ မြင့်မားစွာ ပျံသန်း နိုင်၍ အမြင်အာရုံ စူးရှပြီး လျင်မြန် ဖြတ်လတ်၏။ တပေါင်း၊ တန်ခူးလမှ စ၍ ငှက်သိုက်ပြုလုပ်တတ်သည်။
၄င်းတို့၏ ငှက်သိုက်များသည် အခြား ငှက်များကဲ့သို့ သစ်ရွက်၊ သစ်ကိုင်းများဖြင့် မပြုလုပ်ကြပဲ ထူးဆန်းစွာ အာခေါင်မှ အာစေး တစ်မျိုးကို အန်ထုတ်၍ အသိုက်ပြုလုပ်ကြသည်။ ယင်းအသိုက်များတွင် ငှက်မများ ၀င်ဥ ကြသည်။
တစ်နှစ်လျင် နှစ်ကြိမ်ဥပြီး တစ်မြုံလျှင် ဥ နှစ်လုံးရှိသည်။ အများအားဖြင့် အထီး တစ်ကောင်၊ အမ တစ်ကောင် ပေါက်သည်။
ငှက်မသည် ငှက်ကလေးများကို နှစ်လ ကြာမျှ ကျွေးမွေး ပြုစုပြီး နောက် အသိုက်မှ ဆင်းသွားကြသည်။
ဇီဝစိုးငှက်များသည် မျိုးပွားရာသီဖြစ်သော ဇန်န၀ါရီလ ၊ ဧပြီလနှင့် သြဂုတ်လများတွင် ဥများဥရန် အသိုက်ဆောက်လေ့ရှိသည်။ အသိုက်ဆောက်မည့် ကျောက်လှိုဏ်ဂူအမိုးမှာ ပေ ၄၅၀ ကျော်ခန့်အထိ မြင့်မားလှ၏။
ဇိဝစိုးငှက်အထီးကသာ အိမ်ဖွဲ့ပေးလေ့ရှိသည်။ အသိုက် ဆောက်လုပ်ရာတွင် ငှက်၏ တံတွေးဂလင်းမှ စစ်ထုတ်လိုက်သော တံတွေးရည်များနှင့် ချေဖျက်ပြီး အစာရည်အချို့ပါဝင်၏။
အသိုက်ပြုလုပ်မည့် နေရာကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး တံတွေးများကို အံထုတ်လုိုက်သည်။
ယင်းတံတွေးများသည် လေနှင့် ထိတွေ့သည့်အခါ မာကြောသွား၏။ ယင်းအံဖတ်များကို ထပ်ခါထပ်ခါ အံပြီး နှုတ်သီးဖြင့် ခွက်ပုံသဏ္ဍာန်ဖော်ပေး သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် ငှက်သိုက်၏ သွေးစများ ပါလာတတ်သည်ကို တွေရ၏။
ငှက်သိုက်မှာ အရွယ်ရောက် ငှက်တစ်ကောင်နှင့် ငှက်ပေါက်စ နှစ်ကောင် နေရန် လုံလောက်သည်။ အဖြူရောင် ငှက်သိုက်တွင် အဖြူရောင် ငှက်မွေးနုများ ပါဝင်သည်။
အမဲရောင်ငှက်သိုက်တွင် အမဲရောင် ငှက်မွေးနုများ ပါဝင်သည်။
အရွယ်အစားအားဖြင့် အမဲရောင် ငှက်သိုက်သည် အဖြူရောင် ငှက်သိုက်ထက် (၂)ဆကြီး၏။
စီးပွားရေး ဈေးကွက်တွင် အဖြူရောင် ငှက်သိုက်ကို လူကြိုက်များ သောကြောင့် (၁၀)ဆမျှ ဈေးပိုကြီးသည်။
ငှက်သိုက်များကို ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာတို့အလယ်မှ လူသူမနီးသော ကျွန်းများပေါ်တွင် အလွန်မြင့်မားသော ကျောက်ဆောင် လှိုဏ်ဂူစောင်းများ၏ အထက်မျက်နှာကျက်တွင် ငှက်သိုက် ဖွဲ့လေ့ရှိကြသည်။
ထို့ကြောင့် ငှက်သိုက် စုဆောင်းချိန်တွင် ငှက်သိုက်များ ရရှိနိုင်သည့် ကျောက်ဆောင် လှိုဏ်ခေါင်းအတွင်း ၀င်ရောက်၍ အတွင်းနံရံကို ခဲယဉ်းစွာ တက်ရောက် ဆွတ်ယူကြရ၏။
ထိုကဲ့သို့ ဆွတ်ယူနိုင်ရန် ကျောက်ဆောင်များကို ငြမ်းဆင်၍ သက်စွန့်ဆံဖျား တက်ရောက်ကာ ခဲယဉ်းစွာ လိုက်လံ စုဆောင်း ကြရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငှက်သိုက်ရသော ကျွန်းများကို သစ်တော ဦးစီးဌာနမှ အုပ်ချုပ်၍ နှစ်စဉ် ငှက်သိုက် သိမ်းယူခွင့် လိုင်စင် ထုတ်ပေးပြီး ဥပဒေများကို လိုအပ်သလို ထုတ်ပြန်၍ ငှက်မျိုးစိတ်မပြုန်းစေရန် စောင့်ရှောက်ပေးထား၏။
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ငှက်သိုက် စုဆောင်းချိန် ကို မတ်လ ပထမပတ်မှ ဒုတိယပတ်၊ ဧပြီလ ပထမပတ်မှ ဒုတိယပတ်၊ ဇူလိုင်လ ပထမပတ်မှ ဒုတိယပတ်၊ နိုဝင်ဘာ (၂၁)မှ လကုန်အထိ (၄)ကြိမ် ခွဲ၍ စုဆောင်းရန် သတ်မှတ်ပေးထား သည်။
စုဆောင်းခွင့်ရရှိသော ငှက်သိုက်များကို သစ်တောဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေး၏။ သွေးပါသော ငှက်သိုက်များကို တွေ့ရှိပါက လိုင်စင်ရရှိထားသူကို ဒဏ်ရိုက်သည်။
လိုင်စင်ထုတ်ပေးရာတွင် ထိုကျွန်းများကို နှစ်စဉ် တစ်လှည့်စီ ပိတ်ပေးထားရ၏။ ပိတ်ထားသော ကျွန်းများပေါ်၌ ငှက်ကလေး များသည် အနှောင့်အယှက် မရှိဘဲ အသိုက် ပြုလုပ် ပေါက်ဖွား နိုင်ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငှက်သိုက်ကို နာတာရှည် ရောဂါရှိသူများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ အင်အားကုန်ခမ်းနေသူများကို ငှက်သိုက်ပေါင်း ကျွေးလေ့ရှိသည်။
ငှက်သိုက်သည် ပရိုတင်း ဓာတ်ကြွယ်ဝပြီး အာဟာရဓာတ် များစွာ ပါဝင်သည်။ သဘာဝ ငှက်သိုက်ကို ခေတ်မီနည်းဖြင့် သန့်စင်ထားသော ငှက်သိုက်ရည်ကို ဆေးဖက်ဝင် အခြား ပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ဖော်ထား သဖြင့်
အဆုတ်ကို အားကောင်း စေပြီး ချောင်းဆိုး၊ အအေးမိနှင့် တုပ်ကွေး ရောဂါများကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေနိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။
ဆေးဖက်ဝင် ပစ္စည်း တစ်မျိုး ဖြစ်သောကြောင့် အလွန် အဖိုးအနဂ္ဃ ထိုက်သဖြင့် ရွှေနှင့် စက်၍ပင် ၀ယ်ယူကြသည်။ ငှက်သိုက် များကို ပြည်တွင်းတွင် အသုံးပြုရုံသာမက ပြည်ပသို့ပါ တင်ပို့ရောင်းချသည်။
နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိသော ငှက်သိုက်သည် တနင်္သာရီတိုင်းမှ ရရှိသောကြောင့် တနင်္သာရီတိုင်းသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင် နေကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
ရည်ညွှန်း…..- မြိတ်တက္ကသိုလ် ၂၀၀၄-၂၀၀၅ နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်းတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသောသတ္တဗေဒဌာန(ဌာနမှူး)ပါမောက္ခ ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်း၏ “ ငှက်သိုက် “ ဆောင်းပါး
ဦးသန်းမြင့် (၂၀၀၁) ၊ ´´ မြန်မာပြည်တောင်ဘက် ပင်လယ်တွင်းက“ စာအုပ်
TKW ( 17 Dec 2016 )
CREDIT -Ko Thet Khing Mdy
ငှကျသိုကျသညျ ပြံလှားငှကျ တဈမြိုးတှငျ ပါဝငျသညျ့ငှကျမြားက လုပျသော အသိုကျ ဖွဈပါသညျ။မိုးစာငှကျ၊ ပွီးလဲငှကျ၊ ဇီဝစိုးးငှကျမြားမှ ငှကျသိုကျကို ထုတျယူရရှိနိုငျ၏။
မွနျမာ နိုငျငံတှငျ ငှကျသိုကျကို ဇီဝစိုးငှကျမှသာ ရရှိပါသညျ။ ဇီဝစိုးငှကျသညျ လထေဲတှငျ ပြံသနျးရငျး ပိုးမှားကောငျမြားကို ဖမျးစားတတျသောကွောငျ့ “လစေားငှကျ´´ ဟုလညျးချေါသညျ။
ဇီဝစိုး ငှကျမှ အမဲရောငျငှကျသိုကျနှငျ့ အဖွူရောငျ ငှကျသိုကျ (၂)မြိုးရရှိပါသညျ။ အမဲရောငျငှကျသိုကျ ကို Collocalia innominata ဆိုသညျ့ ဇီဝစိုးငှကျမှရရှိပွီး အဖွူရောငျငှကျသိုကျကို Collocalia fuciphaga ဆိုသညျ့ ငှကျသိုကျမှ ရရှိသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ ငှကျသိုကျမြားကို ထားဝယျကမျးခွအေနီးရှိ ကြှနျးမြား၊ မွိတျကြှနျးစု၊ ပုသိမျမွို့ အနောကျတောငျဘကျရှိ ကြှနျးမြားတှငျ တှရေ့၏။
တနင်ျသာရီတိုငျးအတှငျးရှိ ငှကျသိုကျ ကြှနျးပေါငျး (၃၂)ကြှနျးမှ အဖိုးတနျးငှကျသိုကျမြား ထှကျရှိပါသညျ။
မွိတျကြှနျးစုရှိ ငှကျသိုကျမြားကို ပုလောမွို့နယျရှိ မလိကြှနျး၊ ကြှနျးစုမွို့နယျရှိ ရအေေးကြှနျးစု၊ ဘုတျပွငျး မွို့နယျရှိ ပုလုတိကြှနျးစု၊ ကော့သောငျးမွို့နယျရှိ ကဆိုငျးလှနှငျ့ ကော့ငနျးကြှနျးစု မြားမှ ရရှိ၏။ ယငျးကြှနျးစုမြား အနကျ မလိကြှနျးမှ ငှကျသိုကျအမြားဆုံး ရရှိသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ ငှကျသိုကျအမြားဆုံး ထုတျလုပျပေးသော ဇီဝစိုးငှကျသညျ စာကလေး အရှယျခနျ့သာ ရှိပွီး မီလီမီတာ ၁၀၀ မှ ၄၀၀ အတှငျးရှိသညျ။
ကြောဘကျ ငှကျမှေးမှာ အမဲရောငျ ရှိပွီး ၀မျးဘကျ ငှကျမှေးမှာ မီးခိုးရောငျ ဖွဈနေ၏။ ဦးခေါငျးမှာ သေးလုံးနပွေီး ကတော့ပုံရှိ မာသော နှုတျသီးနှငျ့ ကယျြသော ပါးစပျပေါကျ ရှိသညျ။
တောငျပံသညျ ခြှနျပွီး အမွီးတိုသောကွောငျ့ ပြံသနျးမှုကို လငျြမွနျစသေညျ့ အပွငျ ညအိပျသညျ့ အခြိနျမှ လှဲ၍ တဈနလေုံ့း ပြံနိုငျသညျ။ တိုပွီးကောကျနသေော ခွသေညျးပါသညျ့ ခွခြေောငျး(၄)ခြောငျးရှိ၏။
ခွခြေောငျး(၄)ခြောငျးအနကျ (၃)ခြောငျးသညျ အရှဘေ့ကျသို့ ကား၍ ညှနျးနသေောကွောငျ့ ကြောကျဆောငျ အစှနျးနှငျ့ အဆောကျအဦး မြားတှငျ ခိုငျမွဲစှာ ကုတျတှယျထားနိုငျသညျ။
ဇီဝစိုးငှကျသညျ လူနှငျ့ဝေးသညျ့ ပငျလယျတှငျး ကြှနျးအခြို့၌ ကြောကျဆောငျ လှိုဏျဂူမြား အကွားတှငျ နထေိုငျလရှေိ့သညျ။ အုပျစုဖှဲ့နတေတျ၍ တဈအုပျစုလြှငျ ထောငျပေါငျး မြားစှာ ပါဝငျ၏ ။
မွပွေငျတှငျ ကကျြစားလမေ့ရှိပေ။ ဝဟေငျနှငျ့ ပငျလယျ ရပွေငျ ထကျတှငျ လငျြမွနျစှာ ပြံသနျးစဉျ တောငျပံပါ အငျးဆကျမြားကို ဖမျးယူ စားသောကျ ပသေညျ။
တိမျရှိသညျ့ နရောအထိ မွငျ့မားစှာ ပြံသနျး နိုငျ၍ အမွငျအာရုံ စူးရှပွီး လငျြမွနျ ဖွတျလတျ၏။ တပေါငျး၊ တနျခူးလမှ စ၍ ငှကျသိုကျပွုလုပျတတျသညျ။
၄ငျးတို့၏ ငှကျသိုကျမြားသညျ အခွား ငှကျမြားကဲ့သို့ သဈရှကျ၊ သဈကိုငျးမြားဖွငျ့ မပွုလုပျကွပဲ ထူးဆနျးစှာ အာခေါငျမှ အာစေး တဈမြိုးကို အနျထုတျ၍ အသိုကျပွုလုပျကွသညျ။ ယငျးအသိုကျမြားတှငျ ငှကျမမြား ၀ငျဥ ကွသညျ။
တဈနှဈလငျြ နှဈကွိမျဥပွီး တဈမွုံလြှငျ ဥ နှဈလုံးရှိသညျ။ အမြားအားဖွငျ့ အထီး တဈကောငျ၊ အမ တဈကောငျ ပေါကျသညျ။
ငှကျမသညျ ငှကျကလေးမြားကို နှဈလ ကွာမြှ ကြှေးမှေး ပွုစုပွီး နောကျ အသိုကျမှ ဆငျးသှားကွသညျ။
ဇီဝစိုးငှကျမြားသညျ မြိုးပှားရာသီဖွဈသော ဇနျနဝါရီလ ၊ ဧပွီလနှငျ့ သွဂုတျလမြားတှငျ ဥမြားဥရနျ အသိုကျဆောကျလရှေိ့သညျ။ အသိုကျဆောကျမညျ့ ကြောကျလှိုဏျဂူအမိုးမှာ ပေ ၄၅၀ ကြျောခနျ့အထိ မွငျ့မားလှ၏။
ဇိဝစိုးငှကျအထီးကသာ အိမျဖှဲ့ပေးလရှေိ့သညျ။ အသိုကျ ဆောကျလုပျရာတှငျ ငှကျ၏ တံတှေးဂလငျးမှ စဈထုတျလိုကျသော တံတှေးရညျမြားနှငျ့ ခဖြေကျြပွီး အစာရညျအခြို့ပါဝငျ၏။
အသိုကျပွုလုပျမညျ့ နရောကို စိတျကွိုကျရှေးခယျြပွီး တံတှေးမြားကို အံထုတျလုိုကျသညျ။
ယငျးတံတှေးမြားသညျ လနှေငျ့ ထိတှသေ့ညျ့အခါ မာကွောသှား၏။ ယငျးအံဖတျမြားကို ထပျခါထပျခါ အံပွီး နှုတျသီးဖွငျ့ ခှကျပုံသဏ်ဍာနျဖျောပေး သညျ။
တဈခါတဈရံတှငျ ငှကျသိုကျ၏ သှေးစမြား ပါလာတတျသညျကို တှရေ၏။
ငှကျသိုကျမှာ အရှယျရောကျ ငှကျတဈကောငျနှငျ့ ငှကျပေါကျစ နှဈကောငျ နရေနျ လုံလောကျသညျ။ အဖွူရောငျ ငှကျသိုကျတှငျ အဖွူရောငျ ငှကျမှေးနုမြား ပါဝငျသညျ။
အမဲရောငျငှကျသိုကျတှငျ အမဲရောငျ ငှကျမှေးနုမြား ပါဝငျသညျ။
အရှယျအစားအားဖွငျ့ အမဲရောငျ ငှကျသိုကျသညျ အဖွူရောငျ ငှကျသိုကျထကျ (၂)ဆကွီး၏။
စီးပှားရေး စြေးကှကျတှငျ အဖွူရောငျ ငှကျသိုကျကို လူကွိုကျမြား သောကွောငျ့ (၁၀)ဆမြှ စြေးပိုကွီးသညျ။
ငှကျသိုကျမြားကို ပငျလယျ သမုဒ်ဒရာတို့အလယျမှ လူသူမနီးသော ကြှနျးမြားပျေါတှငျ အလှနျမွငျ့မားသော ကြောကျဆောငျ လှိုဏျဂူစောငျးမြား၏ အထကျမကျြနှာကကျြတှငျ ငှကျသိုကျ ဖှဲ့လရှေိ့ကွသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ငှကျသိုကျ စုဆောငျးခြိနျတှငျ ငှကျသိုကျမြား ရရှိနိုငျသညျ့ ကြောကျဆောငျ လှိုဏျခေါငျးအတှငျး ၀ငျရောကျ၍ အတှငျးနံရံကို ခဲယဉျးစှာ တကျရောကျ ဆှတျယူကွရ၏။
ထိုကဲ့သို့ ဆှတျယူနိုငျရနျ ကြောကျဆောငျမြားကို ငွမျးဆငျ၍ သကျစှနျ့ဆံဖြား တကျရောကျကာ ခဲယဉျးစှာ လိုကျလံ စုဆောငျး ကွရသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ ငှကျသိုကျရသော ကြှနျးမြားကို သဈတော ဦးစီးဌာနမှ အုပျခြုပျ၍ နှဈစဉျ ငှကျသိုကျ သိမျးယူခှငျ့ လိုငျစငျ ထုတျပေးပွီး ဥပဒမြေားကို လိုအပျသလို ထုတျပွနျ၍ ငှကျမြိုးစိတျမပွုနျးစရေနျ စောငျ့ရှောကျပေးထား၏။
၂၀၀၅ ခုနှဈတှငျ ငှကျသိုကျ စုဆောငျးခြိနျ ကို မတျလ ပထမပတျမှ ဒုတိယပတျ၊ ဧပွီလ ပထမပတျမှ ဒုတိယပတျ၊ ဇူလိုငျလ ပထမပတျမှ ဒုတိယပတျ၊ နိုဝငျဘာ (၂၁)မှ လကုနျအထိ (၄)ကွိမျ ခှဲ၍ စုဆောငျးရနျ သတျမှတျပေးထား သညျ။
စုဆောငျးခှငျ့ရရှိသော ငှကျသိုကျမြားကို သဈတောဦးစီးဌာနမှ စဈဆေး၏။ သှေးပါသော ငှကျသိုကျမြားကို တှရှေိ့ပါက လိုငျစငျရရှိထားသူကို ဒဏျရိုကျသညျ။
လိုငျစငျထုတျပေးရာတှငျ ထိုကြှနျးမြားကို နှဈစဉျ တဈလှညျ့စီ ပိတျပေးထားရ၏။ ပိတျထားသော ကြှနျးမြားပျေါ၌ ငှကျကလေး မြားသညျ အနှောငျ့အယှကျ မရှိဘဲ အသိုကျ ပွုလုပျ ပေါကျဖှား နိုငျကွသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ ငှကျသိုကျကို နာတာရှညျ ရောဂါရှိသူမြား၊ သကျကွီးရှယျအိုမြား၊ အငျအားကုနျခမျးနသေူမြားကို ငှကျသိုကျပေါငျး ကြှေးလရှေိ့သညျ။
ငှကျသိုကျသညျ ပရိုတငျး ဓာတျကွှယျဝပွီး အာဟာရဓာတျ မြားစှာ ပါဝငျသညျ။ သဘာဝ ငှကျသိုကျကို ခတျေမီနညျးဖွငျ့ သနျ့စငျထားသော ငှကျသိုကျရညျကို ဆေးဖကျဝငျ အခွား ပစ်စညျးမြားနှငျ့ ပေါငျးစပျဖျောထား သဖွငျ့
အဆုတျကို အားကောငျး စပွေီး ခြောငျးဆိုး၊ အအေးမိနှငျ့ တုပျကှေး ရောဂါမြားကို သကျသာ ပြောကျကငျးစနေိုငျကွောငျး သိရပါသညျ။
ဆေးဖကျဝငျ ပစ်စညျး တဈမြိုး ဖွဈသောကွောငျ့ အလှနျ အဖိုးအနဂ်ဃ ထိုကျသဖွငျ့ ရှနှေငျ့ စကျ၍ပငျ ၀ယျယူကွသညျ။ ငှကျသိုကျ မြားကို ပွညျတှငျးတှငျ အသုံးပွုရုံသာမက ပွညျပသို့ပါ တငျပို့ရောငျးခသြညျ။
နိုငျငံခွားဝငျငှရေရှိသော ငှကျသိုကျသညျ တနင်ျသာရီတိုငျးမှ ရရှိသောကွောငျ့ တနင်ျသာရီတိုငျးသညျ ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံတျောကွီး၏ စီးပှားရေး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုတှငျ တဈဖကျတဈလမျးမှ ပါဝငျ နကွေောငျး တငျပွအပျပါသညျ။
ရညျညှနျး…..- မွိတျတက်ကသိုလျ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ နှဈလညျမဂ်ဂဇငျးတှငျ ထညျ့သှငျးဖျောပွထားသောသတ်တဗဒေဌာန(ဌာနမှူး)ပါမောက်ခ ဒျေါမွငျ့မွငျ့သနျး၏ “ ငှကျသိုကျ “ ဆောငျးပါး
ဦးသနျးမွငျ့ (၂၀၀၁) ၊ ´´ မွနျမာပွညျတောငျဘကျ ပငျလယျတှငျးက“ စာအုပျ
Vaseline ရဲ့ တမူထူးခြားအသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းများ
ဆိုင်မှာလည်း အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်းလည်းသက်သာတဲ့အပြင် အသုံးတည့်တဲ့ အတွက် Vaseline ကိုမသိတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ Vaseline ကို နှုတ်ခမ်းအစိုဓာတ် ထိန်းဖို့၊ အသားအရေချောမွေ့စေဖို့အတွက် ဆိုပြီး အသုံးပြုလာကြတာပါ။ အမှန်တကယ်တော့ ဒီ Vaseline က နှုတ်ခမ်းနဲ့ အသားအရေ အစိုဓာတ်ထိန်းရုံ အတွက်ပဲ အသုံးပြုနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ …
အကုသိုလ်၏ နောက်ကွယ် …….
အကုသိုလ်၏ နောက်ကွယ် ……. ‘ သြကာသ သြကာသ သြကာသ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ x သမ္ဗဒေါသခပ်သိမ်းသော ××……×××…………×××…………×××………×××………×××………××……. နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကို ရပါလို၏အရှင်ဘုရား” ”ဟာ အဖေရေ မနေ့ညက ကျုပ်တို့ဖမ်းပြီး စဉ့်အိုးထဲထည့်လှောင်ထားတဲ့ငါးတွေ ခုသေအံ့မူးမူးဖြစ်ပြီးအသက်ငင်နေကြပြီဗျ ခုမနက်စာထမင်းပူပူလေးနဲ့ ငါးကြော်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးနဲ့ဆွဲရအောင် ကျုပ်ဒီကောင်တွေကို ကိုင်လိုက်တော့မယ်အဖေရေ …
ကောင်းလိုက်တာမှ ပြောမပြတတ်အောင်ကို ကောင်းတာပါ..။
ကောင်းလွန်းလို့မျှဝေပါသည်။ မကျွေးချင်ရင်မပြပါနဲ့ မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင်ဖြစ်သည် ကျောင်းသူတစ်ဦးနှင့် ကျောင်းသားတစ်ဦး စကားပြောနေသည်ကို ဆရာမ ဘေးမှခြောင်းပြီး နားထောင်နေသည်။ ကျော်ကျော်ရေ ။ဒီမှာကြည့်ပါ့အုံး။ ငါ့အိမ်ကပေးလိုက်တာ။ ပန်းသီးတစ်လုံး။ အရမ်းစားလို့ကောင်းမှာပဲဟဲ့ ။” ငါ့ကိုလဲ တခြမ်းကျွေးပါ့လား ။ မြင့်မြင့်ရယ် ။ ငါလဲ စားချင်လို့ပါ ။ အောင်မှာ ဘာလို့ကျွေးရမှာလဲ …